Ny akanjo marevaka ataon'ny vehivavy
Amin'ny ririnina amina tovovavy maoderina, ankoatra ny akanjo sy akanjo lava, dia tokony hisy akanjo hoditra lamaody , satria manome hafanana sy fampiononana izy ireo amin'ny fotoana iray ihany.
Tamin'ity vanim-potoana ity, ireo mpahaikanto dia nanolotra fanangonana vaovao amin'ny akanjo marevaka marevaka amin'ny lamaody izay mahafaoka tanteraka ny fiainan'ny vehivavy maoderina.
Ankehitriny, mba hamoronana modely modely amin'ny akanjo hoditra, karazana felà hafa no ampiasaina, fa ny mpitarika eo anivon'ny hafa kosa dia ondry. Sheepskin dia fitaovana tsara indrindra hanaovana akanjo mafana sy lamaody mafana. Tena tsara tarehy avy amin'ny lamban'akanjo ny modely vita amin'ny akorandriaka fehiloha izay mifanaraka tanteraka amin'ny sary. Ohatra, mety ho fanatanjahan-tena ara-dalàna, ara-barotra na vehivavy kokoa. Ny fisafidianana loko sy fomba fanao mahazatra, afaka mamorona sary tsy mahazatra fotsiny ianao, fa kosa dia ho voakiana tsara amin'ny andro iray manontolo. Etsy ankilany, momba ny fomba mahazatra ny lamban'akoho amin'ity vanim-potoana ity.
Noho izany, ity vokatra ity dia voapoizina miaraka amin'ny vokatra hafa dia modely lava lava vita amin'ny lamban'akanjo, izay amin'ny endriny sasany dia mitovy amin'ny akanjon'antoka mivantana avy amin'ny miaramila, tafiditra ao anaty fehikibo matevina. Ny endriky ny akanjo hoditr'akanjo toy izany amin'ny kirarony amin'ny solefatra sy kitapo postal, napetraka teo ambonin'ny soroka. Ny kitapo sy ny palitao eo ambanin'ny akanjo hoditra dia mety loko mitovy, izay hamorona sary maotina sy mahasalama.
Ny modely tsara tarehy amin'ny akanjo hoditra misy felam-paty sy kapa, natao tamin'ny fomba biranjiana bogeois, dia hifanaraka amin'ny vehivavy tsara tarehy. Hatramin'ny androany, ny lamaody amin'ireo taona 70 dia ambony lavitra noho ny laza, mety tsara ny manasongadina ny tavy amin'ny fehikibo fehikibo na fehikibo, raha mamorona silhouette iray misy X.
Ary bebe kokoa ny akanjo ny lamban'akanjo tanora, noforonina tamin'ny endriky ny hain-tany - ny fironan'ity vanim-potoana ity. Ny akanjo hoditra toy izany dia azo atao amin'ny akanjo marevaka, akanjo-pantsy sy pataloha. Ny akanjo dia afaka mifidy kiraro maotina, ary mba hahazoana sary misongadina bebe kokoa, dia ilaina ny misafidy booty mafy amin'ny haingam-pandeha miaraka amin'ny pataloha tery.
Inona avy ireo volo momba ny lamaody amin'ny 2015?
Sary mampiavaka ny 2016
Manicure Fall 2017 - lamaody fironana, fironana, loko, hevitra
Akanjo fitafiana ho an'ny tovovavy 2014
Muffins miaraka amin'ny voaloboka
Dwayne "Rock" Johnson miandrandra ny fahaterahan'ny zaza iray
Ahoana ny fisafidianana ny fakantsary nomerika?
Vokatra avy amin'ny tavoahangy plastika
Ahoana ny fomba hametrahana ny laminasa?
Toe-tsaina lava mitatao amin'ny lohateny
17 zava-misy mahagaga momba ny vatantsika
Solitaire fahiny - Interpretation
Olona avy amin'ny holatra amin'ny tongony
Tora-bato ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny